Wararka Suuqa Kala Iibsiga Maanta: David Alaba Oo Ku Biiri Kara... - Wararka Maanta
Home/Warka Ciyaaraha/Wararka Suuqa kala iibsiga Maanta: David Alaba oo ku biiri kara…
Wararka Suuqa kala iibsiga Maanta: David Alaba oo ku biiri kara…
Qeybta Danbe Suuqa Kala iibsiga 13 Maarso
Chelsea iyo Manchester City ayaa laga yaabaa inay galaan dagaalka loogu jiro daafaca reer Austria David Alaba, kaasoo qandaraaskiisa Bayern Munich uu dhacayo xagaaga, madaama mushaharka 28 jirkaan uu culees ku noqonayo Barcelona iyo Real Madrid. Daily Star
Barcelona ayaan qorsheyneynin inay xilka ka qaado tababare Ronald Koeman marka Joan Laporta uu noqday madaxweynaha kooxda markii labaad. Sport .es
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Liverpool Georginio Wijnaldum qandaraaska uu kula jiro Liverpool ayaa dhacaya xagaaga, heshiiska 30 jirkaan reer Holland uu ugu wareegayo Barcelona ayaa ah “95% mid la dhameystiray “. Footballinsider
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester United Paul Pogba ayaa ku jira liiska ciyaartoyda diirada u saaran Paris St-Germain, kooxda Ligue 1 ayaa xiriir la sameysay wakiilka 27 jirka reer France. FootMercato
Manchester United ayaa liiskeeda xagaaga ku dartay goolhayaha kooxda Burnley Nick Pope, inkastoo ay tartan kala kulmi karaan kooxda Tottenham oo ku aadan 28 jirkaan reer England. Daily Star
Qeybta Hore Suuqa Kala Iibsiga ( 13 Maarso )
Tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa lagu abaalmarin doonaa qandaraas cusub oo qaali ah oo uu ku sii joogayo Old Trafford, sida ay qortay Mirror .
Mid ka mid ah waxyaabaha mudnaanta koowaad siinaya Joan Laporta markuu ku soo laabto madaxtinimada Barcelona ayaa noqon doonta cusbooneysiinta qandaraaska Ousmane Dembele, sida ay qortay Sport .
Xiddiga Atletico Madrid Saul Niguez ayaa dalab ka helay Bayern Munich, sida laga soo xigtay AS .
Mustaqbalka dhowr ciyaartoy ee kooxda koowaad Manchester United ayaa lagu wadaa in lagu go’aamiyo shirarka kala iibsiga Goobta Mustaqbalkooda uu yahay. The Sun
Barcelona ayaa goordhow go, aan ka gaari doonta waxa laga yeelayo amaahda Betis Emerson, sidaas waxaa qortay Marca .
Turkiga oo War kasoo saaray xiisadda dalalka Ukraine & Ruushka – Wararka Maanta:…
10 Dal ee ugu Sirdoonka Xoogan Caalamka Maanta| Xulashada Dunida
Alaba biiri david iibsiga kala kara maanta Suuqa Wararka
Kenya oo ka baxday kiiska dacwada badda Soomaaliya ee maxkamadda ICJ
Daahir Maxamuud Geelle oo weerar culus ku qaaday MW Farmaajo
QM, Midowga Yurub, IGAD iyo AU farriin cad u diray DF…
Points were killed in a day of Myanmar violence against protesters, reports say – Home somali news…
Wararka Somali 618
Warka Caalamka 135